‘Investeriin ummata gargaaruu baannaan investera hin ta’u’ – Kichuu
HomeAfaan OromooRadio‘Investeriin ummata gargaaruu baannaan investera hin ta’u’
‘Abbaan hiyeessaa’ Dinquu Dayyaasaa waajira VOA,DC dhufee maa jedhee kanaa?
(voaafaanoromoo) — Obboo Dinquu Dayyaasaa,abbaan Naa’oli, dureeyyii Oromoo gargaaruun maqaa baafatan keessaa tokko.Abbaan Naa’ol durii km 10 oli baaddiyaa keessaa miilaan deemee barate.Birrii 3,000 argatetti horeefii asi gaheefl. Obboo Dinquun gaafuma diqqaatuu haadhaa fi abbaa fi jaarrolee ollaa isaa laalaa biyya gargaaraa oli guddate.
Abbaan Naa’ol,obbo, Dinquun dhiphuu fi bal’inna hedduu keesa bahee dureeoome.Maatiin aabba Dinquu Shawaa Dhiyaa, Walancitii aanaa Boset qubata. Obboo Dinquun gaafa sadarkaa jidduu galeessaa baratu ijoollee didiqqoo gaaddisa muka jalatti barsiisaa bahe.
Maammoo Gadaa,jaarsi biyyaa, bara ufiitti akka namii ijoolle barsiifatu ollaa keessa deemee lallabe.Aaabba Dinquulleen ijoollee Maammoon barnootatti oofe keesssaa tokko.
Obboo Dinquu birrii 3,000 namii kenneef walirra buufatee mana barumsa sadarkaa tokkeessoo NFYD jaareef NFYD,qubee qaraa ta maqaa ijoollee isaati, Itoophiyaa fulaa 8 keessaa qaba.
Angafii isaa Naaf Yaadi. Achnii Rift Valley College jedhee koollee Rifti Vaalii banate.Yuniverstitiin sun guddattee yuniverstii taatee amma damee 46 hojjattoota kuma hedduu waliin qaba.Qaanqee muka guddaa ollaa naannoo Booseti cinnixxe amma fulaa hedduu geette. Obboo Dinquun Itoophiyaa keesaa fulaa hedduu mana barumsaa qaba.Fulaan koollejjin hingeenneef manamana barumsaa fagoo brtan.sistance education 300 caalaa qaba.
Afaan Oromoo guddisuuf Obboo Dinquun ganna 16 fi 17 duratti afaan Oromoo guddisuuf ijoollee yuniverstii eebbifamte akka warrii Afaan Oromoo barsiisu hiriin gargaaraa bahe.
Wallagaa keessatti akka ijoolleen kahimaa qonnaan ufi dandahan tolchuuf qonna ‘Bareedaa ‘ka mootummaan kenneef ijoollee daragggoo qoode.
Adaamaatti ammoo akka ijoolleen kahimaa hujii investimenti mataa ufi qabatu tolchuuf jajabeessaa bahe.
Sodoree duratti suuqilee ijoolleen naannoo daldalaan ufi jabeessuu dandahan 40 caalaa jaaree kenneef.“Horiin baayyee qabaadheefii miti namoonnii akka kiyyaa baa’eetti jira.Ana ilaalanii ummata akka gargaaranii fedha.”
Obboo Dinquun miliyeenera tahaa jedhee hin hojjannee “Hojjadhee nama tahaa jedhee ufu duratti argaa turee jedha.
Akka jecha obboo Dinquutti investerii jechuun nama ollaa hujii investimentii keessatti hojjatu gargaaru ykn ammoo “teknooloojii ummatii faaydaa guddaa keessaa argachuu dandahu naannootti fide.”Investerii jechuun nama fulaa investimenti keessatti hojjatu jeessatu nama jabeesse.